Arleta Little, Arts program officer and director of artist fellowships, Kristen Marx, Arts program administrator, Sarah Berger, Arts program officer, and Vickie Benson, Arts program director. Photo Credit: Molly Miles
Qeybta:Aaladda8 min akhris
Fanaaniinta Shaqeeya ee loo yaqaan 'Key to Community Vibrant'
Fikirka Vickie Benson
Qoraalka feylka: Agaasimaha barnaamijka farshaxanka Vickie Benson ayaa diyaarinaya hoos u dhig laga bilaabo Abaalmarinta dhammaadka Juun, waxay ka tarjumeysaa horumarinta barnaamijka Farshaxanka. Waxaan ku soo dhaweyneynaa Vickie 12-sano ee adeegga khaaska ah iyo dhiirigelinta hoggaaminta, waxaanan rajeyneynaa iyada oo ay bilowday cutub cusub.
Markaan isu diyaarinayo inaan ka tago McKnight Foundation, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qaar badan oo idinka mid ah ka qaybqaadashada safarkayga. Runtii waxay ahayd sharaf inaan matalo McKnight. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa kooxda Fanka ee Arleta Little, Sarah Berger, iyo Kristen Marx. Waan ogahay inay sii wadi doonaan hal abuurka farshaxanka shaqaynaya, ee abuuraya kuna tabarucaya bulshadeena firfircoon. Hoos waxaa ku yaal, Waxaan la wadaagayaa waxoogaa ka mid ah doorkii McKnight ee taageerista fanaaniinta muddo tobanaan sano ah.
Vickie Benson ayaa ciyaaray guitar munaasabadda shaqaalaha McKnight.
Wadashaqeyn: Talaabada Koowaad ee Aqoonsiga Farshaxanka
Sannadkan waxa la tilmaamayaa sanadka 39aad McKnight Artist Fellowships. Sannadkii 1981, ka hor inta uusan aasaasin shaqaale barnaamijka farshaxanka ah, goluhu wuxuu abuuray Shirkadda McKnight Artist Fellowship oo ah abaalmarin tartan ah oo loogu talagalay farshaxan-yahannada midnimada. Laga bilaabo bilawga, isdhexgalka gaarka ah ee anshax-marinta ayaa si istaraatiijiyadeed loogu meeleeyay adeegga adeegga farshaxanka. Inkasta oo barnaamijka la aasaasay McKnight's, waxa uu ahaa oo sii waday in la fuliyo iyada oo loo marayo hay'ado badan oo lammaanaheena ah. Hirgelinta Shuraako ee ururada iskaashiga ah waxay caddeeyeen in ay muhiim u yihiin ka caawinta dhismaha nidaamka farshaxanka ee Minnesota.
Kaalmada Gobolka ee Fanka
Sidoo kale horraantii 1980-meeyadii, McKnight wuxuu lacag ku bixiyay 11 Golaha Degaannada Gobolka (RACs), oo qawaaniinta na amma. Miisaaniyadda McKnight waxaa loo qaybiyay farshaxanada, ururada, mashaariicda, waxbarashada, iyo ololaha raasumaalka, sannadkii 2011-kii RAC-yada waxay isku raaceen McKnight inay u hoggaansamaan diiradda saaran farshaxanada shaqada. Iskaashi la leh RAC, McKnight wuxuu taageeray suurtagalnimada in lagu maal galiyo farshaxanada shaqeeya dhammaan 87 degmo Minnesota. Tan iyo 1991-kii McKnight wuxuu sidoo kale ku lahaa barnaamij deeq-bixin oo xooggan oo loogu talagalay ururada kale ee farshaxanka ee gobolka oo dhan.
Qiimaynta Farshaxanka Farshaxanka
Markii aan imid McKnight sannadkii 2007, waxaanu ku hawlanay qiimeynta Minnesota maalgelinta farshaxanka. Farsamadu waxa ay ka go'an tahay farshaxanka waxaana rabay in ay sare u qaadaan saameynta taageeradooda iyaga oo diiradda saaraya qeyb muhiim ah oo ka mid ah hannaanka farshaxanka farshaxanka. Qiimaynta ayaa shaaca ka qaaday in qeyb ka mid ah qaybaha sii kordhaya ee farshaxanka farshaxanku ay ahaayeen fannaaniinta naftooda, gaar ahaan fannaaniinta shaqada.
Just ka hor qiimeynta, waxaa la ii soo bandhigay warbixinta Maria Rosario Jackson et al. ee Machadka Magaalo la yiraahdo Maalgashiga Wax-soosaarista: Daraasadda Qaab-dhismeedka Taageerada ee Maraykanka Farshaxanada. Daraasaddan ayaa si qoto dheer u fekertay.
Mid ka mid ah natiijooyinkii ugu muhiimsanaa ee ku salaysan codbixinta qaran, wuxuu ahaa "farshaxanka abuura alaabada (shaqada muusikada, filimka, suugaanta, iyo wixii la mid ah) ayaa inta badan u muuqda in la furo maskaxda dadwaynaha laftiisa." Waxaa intaa dheer, "Xitaa marka shaqadii farshaxanka loo aqoonsado mid qiimo badan leh oo uu sii wado inuu saameyn ku yeesho shakhsiyaadka iyo bulshadaba qaabab badan, xiriirka u dhexeeya fiicnaanta-iyo dadaalka iyo khayraadka u soo galaya-iyo farshaxanka sameeyay ayaa inta badan aan la arki karin."
Tani waxay muujinaysaa, iyadoo walbahaaraysa, na siisay waddo hore. Waxaan diiradda saareynaa farshaxanno, waxaan ka soo horjeednay isbeddelka maalgalinta farshaxanka, taas oo waqtigan xoojisay helitaanka dhegaystayaasha farshaxanka.
"Farshaxanadu waxay gacan ka geystaan farshaxanka, dhaqaalaha, bulsho ahaan iyo dhaqan ahaanba dhexdooda bulshooyinkeena. Iyaga oo maareynaya miyir-beel iyo xeel-dheereyn, dad farshaxanno ayaa sameeya oo isbeddel ku sameeya bulshada. " -VICKIE BENSON, BARNAAMIJKA BARNAAMIJKA ARTS
Qiimeeynta Farshaxanada Shaqaynta iyo Faafinta Ereyga
Daraasadaha sida kuwan iyo dadaalka McKnight ee ku aaddan faragalinta farshaxanada Minnesota waxay naga gaareen hadafkayaga hada jira: "Waxaan taageernaa farshaxanada shaqada si ay u abuuraan bulshooyin firfircoon. Minnesota waxay dhalinaysaa marka ay farshaxannadu sii fiicnaadaan. "McKnight ayaa hoggaankii hogaaminayay taageerada shaqsiyaadka farshaxanka ah, waxaanan hadda helnaa maalgeliyeyaasha kale ee raacsan.
Iyada oo qayb ka ah u-qareemeynta fanaaniinta shaqada, McKnight waxa uu aaminsan yahay in ay muhiim u tahay kordhinta aqoonsiga dadweynaha ee qiimaha fanaaniinta ee beelaheena. Mid ka mid ah natiijada iskaashi ayaa ahaa Creative MN, mashruuc bienaal ah oo bixiya cilmi baaris si loo hagaajiyo fahamka dadweynaha ee muhiimadda farshaxanka ee tayada nolosha iyo dhaqaalaha. Sanadka 2017, Creative MN ayaa soo warisay in fanaaniinta shaqsiyaadka iyo shaqaalaha hal-abuurka ah ee Minnesota ay sameysteen warshado muhiim ah-oo sannad walba soo saarey $ 644 milyan oo ah dhaqdhaqaaq toos ah oo dhaqaale oo gobolka oo dhan ah oo ka badan $ 2 bilyan oo saameyn guud ahaan dhaqaalaha.
Intaas waxaa dheer, waxaanu ku doodnay in lagu daro qaybta farshaxanka iyo dhaqanka Compass Minnesota, nidaamka raadraaca oo falanqeeya isbedelka saameynaya tayada nolosha ee gobolka.
Codka McKnight ee taageerada fannaaniinta shaqeeya ayaa sidoo kale gacan ka gaystay sidii loo sii wadi lahaa himilooyinka ArtPlace America iyo dadaalada kale ee la abuurayo. Sababtoo ah waxaan ogaanay farshaxanada miyiga ah in ay noqdaan qaar ka mid ah waddanka ugu yar ee la arki karo, waxaanu u shaqeynay sidii loo hubin lahaa in mashruucyada ArtPlace ay ka mid yihiin dadaal bulsho-ku salaysan.
Vickie Benson waxa uu la shaqeeyay dad badan oo ka mid ah fanaaniinta farshaxanka iyo fanaaniinta Minnesota, oo ay ku jiraan Masraxa Penumbra, Wing Young Huie, iyo Farshaxanada Juxtaposition.
Farshaxanada sida Changemakers
Isaga oo kaashanaya asxaabta McKnight ee aagagga Gobolka & Bulshada, Webiga Mississippi, iyo Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest, waxaan maalgelinay farshaxanada qaybaha aan hore u fahmin shaqadooda.
The Alliance Water, tusaale ahaan, hadda waxay si joogta ah u abaabushaa suxufiyiinta farshaxanimada, maadaama ay kooxdu aqoonsatay muhiimada farsamoyaqaanada xalinta dhibaatooyinka iyo in ay wadaan hawlgal dadweyne. Wasaaradda Gaadiidka ee Minnesota waxay hadda leedahay barnaamij farshaxan oo ku dhex noolaansho ah si ay gacan uga geysato horumarinta iskaashiga jaaliyada iyo xalinta arimaha thorny. Iyada oo Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest, waxaan wada maal-galinnay diiradda Northern Sparkfarshaxanayaasha isbeddelka cimilada.
Waxaan ku soo qaatay xirfaddayda u qareemeysa qiimaha farshaxanayaasha ee bulshada, sidaas awgeed waa wax cajiib ah maanta si aad u aragto farshaxanada qaybo badan oo ka baxsan farshaxanka. Ka qayb qaadashada McKnight ayaa saameyn ku yeeshay arrintan.
Raadinta Sinaanta iyo Dhaqanka
Farshaxanadu waxay gacan ka geystaan farshaxanka, dhaqaalaha, bulsho ahaan, iyo dhaqankooda dhexdooda bulshooyinkeena. Iyadoo la macaamilayo miyir-beel iyo wada-hadal bulsheed, farshaxan-yahannadu waxay sameyn karaan oo isbeddeli karaan isbeddel bulsheed.
Marka aynu nidhaahno "Minnesota waxay ku fiicneyd," waxaannu ka dhignay dhaqanno dhaqameed oo kala duwan - oo ka yimid dadka Ojibwe iyo Dakota kuwaas oo halkan ku noolaa kumaan kun, oo ah bulshooyinka soo galootiga dhowaan yimid. Farshaxanadu waxay qabtaan oo ay la xiriiraan qiimaha iyo dhaqanka bulshooyinkeena kala duwan, waxayna abuurayaan oo kobciyaan aqoonsiyada dhaqameed ee cusub ee bulshada ku dhexjirta.
Ururada taageera bulshooyinka kala duwan ee farshaxanada shaqeeya ayaa muhiim u ah istiraatiijiyadayada iyo nidaamka farshaxanka farshaxanka, laakiin kala duwanaanta maalgelinta qoto dheer ayaa joogta. Xogta la ururiyey Ma aha Lacag Lacag ah: Arimaha Sinnaanta ee Farshaxanka Dhaqanka (Helicon, 2017) waxay muujisay in maalgelinta farshaxanka guud ahaaneed ay noqotey mid u siman shan sano ka dib tan daraasad la mid ah, Farshaxanka Art, Dhaqanka iyo Isbedelka Bulshada (Guddiga Qaran ee Farxad Leh, 2011), waxay baaris ku sameeyeen arimaha sinnaanta ee farshaxanka. Fikradda, farshaxanka iyo deeqda dhaqameedku maaha kuwo si wax ku ool ah ama si siman u taageeraya muuqaalka dhaqanka ee isbeddelka.
Tirakoobyada ka soo baxay daraasaddan ayaa nagu yaabay oo nixiyey, sidaas darteed kooxdayada afarda xubnood ee Fannaaniinta ah ayaa bilaabay baaritaan ah oo bilaabay in la eego gudaha. Waxaan tixgelinnay nidamyadayada iyo xiriirka aan la leenahay bulshooyinka kala duwan. Waxaan sii ballaarinay xiriirkeena si aan ugu darno beelaha farshaxanada ee ka maqan portfolio, waxaanan bilaabeynaa inaan bedelno sanduuqyadayada deeq-bixiyeyaasha si aan ugu darno ururo badan oo ay hoggaaminayaan dadka midabada iyo dadka asaliga ah (POCI) oo taageera farshaxanada shaqada ee beelahooda. Waxaan kordhinay deeqaha ururada POCI horayba u soo galey qaybtaheena.
"Markaan nidhaahno 'Minnesota waxay ku fiicantahay,' micnaheedu waa dhamaan dhaqamada kala duwan ee dhaqamada kala duwan-dadka Ojibwe iyo Dakota kuwaas oo halkan ku noolaa kumaan kun, oo ay ku nool yihiin bulshooyinka soo galootiga dhowaan yimid." -VICKIE BENSON, BARNAAMIJKA BARNAAMIJKA ARTS
McKnight iyo bulshada guud ahaanba way wanaagsan tahay sababtoo ah Masraxa Penumbra, Masraxa Mu, Pangea World Theater, Dhamaan Xirfadahayda Xirfadaha, Farshaxanada isboortiga, Mizna, TU qoobka, iyo Teatro del Pueblo, dhammaan ururrada muddada fog. Waxaan sidoo kale dhamaanteen ku fiicanahay imaanshada ururada cusub oo ay ku jiraan Farshaxanka Gizhiigin ee Goobta Dhulka ee Dunida, Rootska asaliga ah, Matxafka Soomaalida, iyo Masraxa Cusub, si aad u magacowdo dhowr ah.
Ururadan dhaqameed ee POCI waxay muhiim u yihiin nidaamka hiddaha fanka. Hase yeeshe, sababtoo ah go'aamo ku salaysan fikradaha xun xun iyo fikradaha dhaqameed ee aan la aqoonsanayn, ma helaan meelo la mid ah ilaha dhaqaalaha. Si loola dagaallamo khaladaadka aan tooska ahayn iyo ka saarida caqabadaha dhismaha, waxaanu gaadhsiinnay asxaabteena, waxaanan la shaqeynay jaaliyadaha iskaashiga ah ee iskaashatada jinsiga - oo ay ka mid yihiin Bush Foundation, Jaamacada Jerome, aasaaska Saint Paul iyo Minnesota, Guddiga Fanka ee Gobolka Minnesota, iyo Propel Wax faa'iido darro ah - Inay ka shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa caddaaladda nidaamyada, geeddi-socodka, iyo qaybinta khayraadka ee deeq-bixiyeyaasha. Inkasta oo ay sidaas sameeyaan waxay noqon karaan kuwo aan fiicneyn iyo kuwa aan dhibsanayn, kuwa deeq-bixiyeyaashu waa inay shaqeeyaan si ay u aqoonsadaan oo ay u yareeyaan khiyaanadooda tooska ah.
Maqnaanshaha McKnight, hoggaankiisa, iyo rabitaankiisa inuu noqdo jagada xooggan ee ururada POCI waxay sii wadi doonaan inay saameyn ku yeeshaan dadka kale waxayna sameyn karaan dadaallo waaweyn oo ku saabsan maaliyadda sinaanta. Waan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahaa safarkan. Waxaan rajeynayaa in aan ka shaqeyno meelo kale oo aan ka shaqeyn karo sinnaanta iyo sida-had iyo jeer-ay la joogaan fanaaniinta.
Kala Qayb Galinta Kooxaha
Laga bilaabo Juun 1 ilaa Diseembar 2019, Arleta Little iyo Sarah Berger u adeegi doona sidii iskaashi kumeelgaar ah oo loogu talagalay kooxda farshaxanka ee McKnight. Tabarucayaasha farshaxanku waxay wali la xiriiri doonaan sarkaalka barnaamijka loo xilsaaray. Haddii kale, xiriirada barnaamijka farshaxanka ayaa dhex mari kara Kristen Marx.